Industrial & Lab Equipment :: Personal Safety & Protection :: Industrial Gloves :: [Showa] 12 Pack Atlas 370BLK Nitrile Tough Gloves - Medium
Home/Industrial & Lab Equipment/Personal Safety & Protection/Industrial Gloves/[Showa] 12 Pack Atlas 370BLK Nitrile Tough Gloves - Medium
[Showa] 12 Pack Atlas 370BLK Nitrile Tough Gloves - Medium
Size : Medium (+2,300 Ks ) Small Large (+2,300 Ks )
Minimum quantity for "[Showa] 12 Pack Atlas 370BLK Nitrile Tough Gloves - Medium" is 12.
The flexible nitrile coating is tougher than rubber, protecting palms and fingertips from the rigors of every day work. Seamless lightweight black nylon knit liner increases comfort while it repels dirt and stains. Ideal for jobs requiring maximum dexterity and freedom of hand movement without the fatigue associated with heavier, bulkier gloves. Machine washable.Powder-free, 6-mil, 11-inch, disposable low-modulus nitrile glove.
Product Dimensions: 11.5 x 6.2 x 1.8 inches ; 0.8 ounces
5.6 x 4.1 x 9.1 inches
ရာဘာထက် ပို အကြမ်းခံတဲ့ nitrile နှင့်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Powder လည်းမပါဝင်ပါဘူး။ လျော်ဖွတ်လို့လည်းရပါတယ်။ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ချိန်တွေမှာ ဝတ်ထားမယ်ဆိုရင် တော့ အရွှေ့အပြောင်းအတွက် လက် သက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဗူးကို လက်အိတ် ၁၂ အိတ်ပါဝင်ပါတယ်။
ရာဘာထကျ ပို အကွမျးခံတဲ့ nitrile နှငျ့ပွုလုပျထားတာဖွဈပွီး Powder လညျးမပါဝငျပါဘူး။ လြျောဖှတျလို့လညျးရပါတယျ။ အလုပျကွမျးလုပျခြိနျတှမှော ဝတျထားမယျဆိုရငျ တော့ အရှအေ့ပွောငျးအတှကျ လကျ သကျသာမှာဖွဈပါတယျ။ တဈဗူးကို လကျအိတျ ၁၂ အိတျပါဝငျပါတယျ။
[Showa] 9905PF N-Dex Nitrile Glove, Powder Free, 11" Length,6mils Thick, Medium [ Pack of 50 ]